Shiinaha ayaa ku xayiran warshad pinel pinel iyo soosaarayaasha | Kingtai
Dhimo pinel dhabel ku dheggan
Naqshadeynta Birta Bare ee leh Faahfaahin Xasaasi ah
Biinanka qaabaysan ee khaaska ah waxay leeyihiin nashqad bir ah oo qaawan oo ka ifaysa ilaha iftiinka.
Naqshadeynta sare ee boolishka ee ku xirmaysa labbiska dharka madow iyo jaakadaha waa qurux badan tahay, halka biinanka la xardhay ee dhammaadka qadiimiga ah ay ka xeelad badan yihiin.
Macaamiisha ayaa jeclaan doona dhaldhalaalka jilicsan ee dhaldhalaalka ah ama xulashooyinka isku-dhafan ee isku-darka iyo isku-dhafka midabada qaabkooda, laakiin qaab-dhismeedka runta ah ee caadiga ah, biinanka ku dhinta ayaa ah xulashada ugu fiican.
Biinanka lagu dhufto ayaa ah hadiyadda ugu fiican ee barnaamijyada aqoonsiga shaqaalaha, guulaha waxbarasho, hanka kooxda iyo munaasabadaha kale.
Kooxdayada farshaxanka waxay khibrad u leedahay farsamaynta gacmeed farshaxan gacmeed gaar ah oo laga soo bilaabo xoqidda iyo dib u soo celinta astaanta kooxda, hal ku dhigga iyo calaamadda oo si sax ah u habboon.
Waxaan nahay xulashada kuugu fiican haddii aad ubaahantahay xirmooyin kudhex dhinta lapel.
Geedi socodka sameynta biinanka loo dhinto waa nidaam dhaqameed, taas oo runtii ah talaabada ugu horeysa ee abuurista noocyo badan oo kala duwan oo biinanka caadada ah.
Adoo ka dhigaya caaryadu qalab gaar ah, keydinta milicsiga naqshadeyntaada, oo u adeegsanaya inaad ku garaacdo (ama ku dhufato) naqshadeyntaada biraha salka, waxaan sameyn karnaa qaybo shaabad fiiqan oo faahfaahsan, oo aan ku heli karno biinano tayo sare leh.
Muuqaalka ugu caansan ee biinanka ugu dambeeya ee wax lagu dhejiyo ayaa ah dusha sare ee dhalaalaya iyo asalka qaabdhismeedka qaabaysan.
Dhimashadeennu waxay ku dhufteen Lapel Pins waxay isticmaalaan naxaas ama bir aasaasi ah macdanta jilicsanaanta darteed si loo gaaro shaabbad tayo sare leh. Dooro mid ka mid ah xulashooyinkayaga dahaadhidda badan; dahab, naxaas iyo naxaas; iyo xulashooyin kale si naqshadeyntaadu uga duwanaato.
Kudar dhagax macmal ah, nambarka taxanaha, ama mid ka mid ah xulashooyinka baakadeyntayada si aad u abuurto cirbadda saxda ah ee hadiyad ahaan loo siiyay hadiyad ahaan, qirasho guul, ama xus sannad-guurada.
Caaryadu ma ku habboon tahay naqshadayda? Biinanka dhinta ayaa ah doorashada ugu fiican, naqshadeynta kuma jiraan dhaldhalaalka midabka ama sawirrada daabacan.
Biinankaan caadada ahi badanaa waxay leeyihiin muuqaal qurux badan oo qaraami ah waana naqshado aad u fiican oo u baahan nadiif, xarriiq xarrago leh.
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, fadlan nala soo xiriir ama dalbo biinanka khaaska ah xulashooyinkaaga kale!
Waxaad go'aamin doontaa nooca pin ee ku habboon qaabeyntaada kooxdayada khibradda leh.
Buuxi foomkeena dalabka oraahda waxsoosaarka gaarka ah oo bixi faahfaahin badan intii suurtogal ah. Kooxdayada ayaa kula soo xiriiri doonta 1 maalin shaqo gudahood si ay ugala hadlaan waxqabadkaaga xiga.
Hore: Dhimashada pinel pinel
Xiga: Billadaha Guusha
Dhinta biinanka dhejiska ku dheggan
Biin dhaldhalaal jilicsan